iPhone7ထက် Saumsung Galaxy S8 ကပိုမိုသာလွန်တဲ့အချက်များ
16 May 2017 . 8:20 PM
Samsung နဲ့ Apple ပြိုင်ပွဲက စမတ်ဖုန်းလောကမှာ ကြည့်ကောင်းဦးမှာပါ။ အခု Galaxy S8 ထွက်လာပေမယ့် iPhone အသစ်ကတော့မထွက်ရှိသေးပါဘူး။ အခုဟာတွေက S8 ကို iPhone7နဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြထားတာပါ။ iPhone အသစ်ထွက်လာရင်တော့ တစ်မျိုးတစ်ဖုံဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
Galaxy S8 + ရဲ့ မျက်နှာပြင်အကျယ်က 6.2 လက်မရှိပြီးတော့ ဘေး၊ အထက်နဲ့ အောက်မှာ Bezels တွေမပါသလောက်ပါပဲ။ 5.5 လက်မ မျက်နှာပြင်အကျယ်ရှိတဲ့ iPhone 7+ ရဲ့ Bezels တွေထက်လည်း ပိုပြီးကျဉ်းမြောင်းပါတယ်။ တိတိကျကျသိချင်ရင်တော့ ဒီ Link ကိုဝင်ကြည့်လို့ ရပါတယ်။ Link -> Galaxy S8 has the highest rated display of all smartphones. Kanken 20L
(၂) အမြန်အားသွင်းနိုင်ခြင်းနှင့် ကြိုးမဲ့အားသွင်းခြင်းနည်းပညာ
Galaxy S8 အတွက် ဘတ္ထရီသက်တမ်းစမ်းသပ်မှုကိုတော့ မလုပ်ရသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် USB Type-C (သို့မဟုတ်) Wirless Dock နဲ့အားသွင်းမယ်ဆိုရင် မိနစ်အနည်းငယ်ပဲကြာမှာပါ။
(၃) MicroSD တိုးချဲ့နိုင်မှု
iPhone 7+ မှာ Memory အများဆုံးရနိုင်တာက 256GB ပါ။ ဒါက လူတော်တော်များများအတွက် သုံးလို့လောက်တဲ့ပမာဏပါ။ GalaxyS8+ မှာတော့ Internal Memory 64GB ပါဝင်ပြီးတော့ ကိုယ်စိတ်ကျေနပ်တဲ့ပမာဏကို သိပ်အများတဲ့ဈေးနဲ့ micorSD ကနေ တိုးချဲ့နိုင်ပါတယ်။
(၄) Gorilla Glass 5
iPhone မှာက အရှေ့မှာ Gorills Glass နဲ့ ကျောဖက်မှာ သတ္တုကာဗာပါပါတယ်။ Galaxy S8 မှာတော့ အရှေ့ရော၊ အနောက်ရော Gorilla Glass နဲ့ပါ။ သူ့ရဲ့ Gorilla Glass5မှာ ကိုယ့်ရဲ့ပခုံးအမြင့်နီးပါး (1.6m) လောက်ကလွှတ်ကျတာကို ခံနိုင်ရည်ရှိဖို့ အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါတယ်။
Galaxy S8 မှာ ဖုန်းကို Unlock ပြုလုပ်ဖို့ Facial Recognition, goedkoop nike air max 2017 Iris Scanning, goedkoop nike air max nederland Fingerprint, air max homme pas cher Patter, Fjallraven Kanken Sale NO.2 PIN,